Imanifesto yam yolonwabo | Martech Zone
Imanifesto yam yolonwabo
NgoLwesihlanu, Novemba 24, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UHugh MacLeod kwi-GapingVoid.com ebenesithuba esihle namhlanje sokubuza abantu 'ngee-manifesto' zabo. Umbulelo undikhuthazile ukuba ndibhale eyam ngolonwabo. Nantsi into endiyibhalileyo kunye nento eyathunyelwa nguHugh (kunye nokuhlelwa kwegrama kunye nomzekelo omnandi kaHugh!):
Inkcubeko yethu izaliswe yimiyalezo esikhokelela kwindlela yokuzibhubhisa. Ulonwabo lulinganiswa nezinto esingenazo… iimoto, imali, iipakethi eziyi-6 zeephutha, amabhaso, iindlela zokuphila, okanye nesoda nje. Ulwazi lulinganiswa nobutyebi, nangona uqokelele okanye uzuze njengelifa. Esi sisifo senkcubeko yethu, esiqinisekisa ukuba asinakuze sibe smart ngokwaneleyo, soze sibe zizityebi ngokwaneleyo, soze sanele.
Amajelo osasazo asonwabisa ngamabali obutyebi, isini, ulwaphulo-mthetho kunye namandla- zonke izinto ezinokusenzakalisa thina okanye abanye xa zithathwa zigqithile. Urhulumente wethu ude athathe inxaxheba kulwalathiso olungafanelekanga, esenza ukuba sibe nelothari. Yonke imiyalezo yentengiso nayo yonke intengiso iyafana, "Uya konwaba xa".
Asonwabanga nabatshatileyo, ngoko ke siyaqhawula umtshato. Asonelisekanga ngamakhaya ethu, ngenxa yoko siye safudusa iintsapho zethu saza sathenga ezinkulu de sakwazi ukuzifikelela. Sithenga de ikhredithi yethu isetyenziswe iphele kwaye siye sonakale. Asonwabanga yimisebenzi yethu, ke siba nenxaxheba kwezopolitiko ukuzama ukukhawulezisa ukunyuselwa kwethu. Asonwabanga ngabasebenzi bethu ke ngoko siqesha abatsha. Asonwabanga yinzuzo yethu, ke siyabavumela abasebenzi abathembekileyo ukuba bahambe.
Siyinkcubeko yabantu abaxelelwa ukuba i-hording yeyona ndlela ilungileyo yolonwabo. Ingca ihlala iluhlaza-intombi elandelayo, ikhaya elilandelayo, isixeko esilandelayo, umsebenzi olandelayo, isiselo esilandelayo, unyulo olulandelayo, olandelayo, olandelayo, olandelayo… Asikaze sifundiswe ukonwaba yile nto sinayo ngoku. Kufuneka sibe nayo, kwaye sinayo ngoku. Kulapho sizokonwaba khona.
Kuba kunokwenzeka kuphela ukuba abambalwa abakhethiweyo babe nayo yonke into, ibar ihlala iphakame kakhulu kunokuba sinokufikelela. Asinakuze silufezekise ulonwabo njengoko kuchaziwe kwinkcubeko yethu. Simelana njani nale meko? Thina amayeza. Iziyobisi ezingekho mthethweni, utywala, amayeza kagqirha, icuba ziyimfuneko kwaye ziyathandwa kuba zithatha unyawo kubomi bethu obungazalisekiswanga.
Enyanisweni, siphezulu kwihlabathi. Siziinkokeli ngayo yonke into yempumelelo elilinganiswe ngayo inkcubeko. Sinemikhosi enamandla, ezona zixhobo zibalaseleyo zendalo, eyona nto ibalaseleyo kwezoqoqosho, kunye nabantu abamangalisayo.
Musa ukuthembela kuye nakubani na okanye nantoni na ngaphandle kwesiqu sakho ukuqhuba ulonwabo lwakho. Akukho namnye ngaphandle kwakho. Xa ukonwaba kwakho akukho mntu unokuluba, akukho mntu unokuluthenga, kwaye akufuneki ujonge kwenye indawo ukuze ulufumane. Kodwa ungapha ezinye nangaliphi na ixesha ongathanda ngalo!
Inkosi ikusikelele kunye neyakho le mbulelo intle! Umbulelo ngumhla omnye kunyaka. Mhlawumbi kuya kufuneka "sizinike ngokwakho" kwaye sibuyele umva ikhalenda yethu. Masichithe unyaka wonke sonwabile ngento esinayo kwaye ngenye imini sizimoshele ngento esingenayo. Masonwabe nosapho lwethu, abantwana bethu, ikhaya lethu, umsebenzi wethu, ilizwe lethu kunye nobomi bethu.
Niya konwaba… xa nifumana ulonwabo kuni.
Ukunceda uMartin Luther King, Jr. nge-SEO? I-Geeks ibuyela umva!
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2006 ngo-10: 32 PM
“Amawakawaka amakhandlela anokukhanyiswa kwikhandlela elinye, kwaye ubomi bekhandlela abuyi kubufutshane. Ulonwabo aluze linciphe ngokwabelana.â ???